Lasa Niova #FeesHaveFallen (Nidina Ny Saram-pianarana) Ilay Tenifototra Tany Afrika Atsimo Hoe #FeesMustFall (Tokony Hidina Ny Saram-pianarana). Fa Tena Izany Tokoa Ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2015 1:58 GMT
Afaka miditra amin'ny fianarana ambony ve ny tanora miaina eny ambany tanàna toa an'i Joe Slovo, ao Afrika Atsimo. Loharanon-tsary: http://tokolosstencils.tumblr.com/. Fampiasàna nahazoana alàlana
Taorian'ilay hetsika nasiônaly #FeesMustFall izay nitondra ireo anjerimanontolon'i Afrika Atsimo ho amin'ny tsy fahafahana nihetsika, nihaona tamin'ireo mpitarika mpianatra ny Filoha Jacob Zuma ny Zoma 23 Oktobra, ary nanambara fa tsy hisy fiakaran'ny vola fandoa. Nampanantena ihany koa izy ny hijery ireo olana lehibebe kokoa izay misy fiantraikany amin'ireo mpianatra ao amin'ny anjerimanontolo, toy ny trano fonenana sy ny fanavakavahana. Nalavaina ihany koa ny fotoana farany ho an'ny fanadinana mba hanenjehana ny fotoana very.
Noeritreretin'ny governemantan'i Afrika Atsimo ny hampitombo 12 isan-jato eo ny saram-pianarana amin'ny fianarana ao amin'ny anjerimanontolo ny taona 2016. Toherin'ireo mpianatra ilay fiakarana izay nitazona ireo Afrikana Atsimo mahantra tsy ho afaka hahazo fianarana ambony. Tao amin'ny Anjerimanontolo Witwatersrand (fantatra ihany koa amin'ny hoe Wits ) no nanomboka ireo fihetsiketsehana, ny Alarobia 14 Oktobra lasa teo, ary niparitaka nanerana an'i Afrika Atsimo.
Lasa fitaovana fifandaminana ho an'ireo mpianatra sy ireo mpanohana azy ireoilay tenifototra #FeesMustFall nampiasain'ireo mpanao hetsika. Niaiky i Carol Danvers fa iray amin'ireo antony fahombiazan'ny hetsika ny Twitter:
tian'ny olona ny manamaivana ny “fikatrohana amin-kafanampo ety anaty Aterineto”, kanefa raha tsy nisy ny media sosialy sahala amin'ny twitter, mety tsy niseho mihitsy ny #FeesHaveFallen
Kanefa, na teo aza ny fanambaràn'ny filoha Zuma, tsy mbola nitsahatra ny tolona satria nanipika izao ny filohan'ny Kaomity Mpisolotena ny mpianatra sady iray amin'ireo mpitarika ny hetsika #FeesMustFall, Shaeera Kalla:
Manontany tena sahady aho hoe inona no hiseho amin'ny herintaona, & ny manaraka? Rehefa tsy misy fanomezan-toky ny amin'ny fianarana tsy andoavam-bola, tsy fandresena ny 0% fiakaran'ny saram-pianarana.
Tonga ireo fanontaniana mikasika ny fampiasàna ilay tenifototra mba hankalazàna ilay fanambaràna ny fiakarana ho aotra isan-jato, #FeesHaveFallen. Nilaza ireo Afrikana Tatsimo sasany fa mamitaka ilay tenifototra, satria tsy miova ilay saram-pianarana sady sakana ho an'ny ankamaroan'ireo Afrikana Tatsimo.
Manontany tena i Lethabo raha tena nidina tokoa ny saram-pianarana:
#FeesHaveFallen fa tena toy izany tokoa ve? Mbola tsy afaka mahazo diplaoma ihany aho satria, aiza aza aho no hahazo +/- R50 000…?
Maminany mialoha fiakarana be amin'ny saram-pianarana i Tiyaselani ho an'ny taona 2017:
@sliez0, tena marina mihitsy ny anao, hiakatra 20% ka ny saram-pianarana ny taona 2017 raha jerena ny #FeesHaveFallen
Nampahatsiahy ireo Afrikana Tatsimo i Lord Zange Aphoswe hoe:
Raha tena efa mifoha tsara ianao, tsy afaka mampiasa ny hoe #TUTmustFall na mino ny hoe #FeesHaveFallen . Mbola lafo hatrany ny anjerimanontolo ary tsy takatry ny maro
Ary nampitandrina momba ilay tenifototra mamitaka:
Ny Zava-doza Ateraky ny Ezaka Iray Ampiasàna Tenifototra #FeesMustFall dia Afaka Misy Tenifototra iray Hafa Manakorontana #FeesHaveFallen . Mbola Ambony Hatrany Ny Saram-pianarana.
‘Tsy misy na inona na inona niova’
Nanamarika izao i Drewan Baird:
Ny tena marina dia sempotr'ilay hoe TsyNidinaNySaram-pianarana ilay hoe #FeesHaveFallen. Tsy nisy na inona na inona niova; nisy zavatra voasakana.
Nahita toerana vaovao nifantohana ho an'ireo mpikatroka mafana fo any Afrika Atsimo i Farieda Khan:
#FeesHaveFallen & fifantohana, tokony hanery ny #ANCGovt mba hampitsahatra #waste (ny fanarinariana fahatany) #extravagance (fandanindaniam-poana) #maladministration (tsy fahaizana mitantana) #corruption (kolikoly) FA TSY mitady fidiram-bola misimisy kokoa!
Mampitandrina ireo olona mitaky ny fampianarana tsy andoavam-bola i Goldman:
Toekarena 101: Fampianarana “tsy andoavam-bola” = fangatahana tsy misy fetra. Samy te-hanana zavatra tsy andoavam-bola daholo ny rehetra (na dia tsy afaka mampiasa io tanteraka aza izy ireo!).#FeesHaveFallen
Raha naneho ny fahatahorany kosa i Gugz Chantelle Nkosi:
Eny, tsy hampiakarina ny saram-pianarana, tsara tokoa izany. Ankehitriny, ho voatohintohina ny kalitaon'ny fampianarantsika. Faly ve ianao ankehitriny? #FeesHaveFallen
Nanome lesona lehibe ho an'ireo mpikatroka mafana fo any amin'ireo firenena hafa ireo fihetsiketsehana ireo, toa an'i Boniface Mwangi any Kenya sy Elnathan any Nizeria:
Afaka manatsara ny fahaizamanaony amin'ny fandrindràna avy amin'ilay #FeesHaveFallen ireo mpikatroka mafana fo any amin'ireo faritra sisa ao Afrika. Ny fahefam-bahoaka.
Tahàka ny #FeesHaveFallen any Afrika Atsimo, mitohy midina hatrany ny fahaizamiaina any Nizeria eny anivon'ireo tanora. Fotoana mampientanentana any Afrika.